UNEHEMIYA 7 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
71Emva kokugqitywa kodonga ndafakela iingcango ezindaweni zazo, kwaza kwamiselwa abalindi-masango, iimvumi, nabaLevi. 2Ndamisela umntakwethu uHanani ukuba avelele iJerusalem, ekunye noHananiya ingqwayi-ngqwayi yenqaba, kuba wayengumfo onentembeko, uThixo emhlonela ngaphezu koninzi lwabantu. 3Kubo ke ndathi: “Makangavulwa amasango aseJerusalem ide ibe seyiqinile imini. Ngethuba besekhona abalindi-masango mabawavale mba amasango ngemivalo. Kananjalo miselani abemi baseJerusalem babe ngabalindi; abanye kwiindawo ezithile, abanye ke kufuphi nezindlu zabo.”
4Ke kaloku isixeko esi sasisikhulu sithe gabalala, kodwa bembalwa abantu ngaphakathi, nezindlu ke zingekakhiwa. 5Ngoku ke uThixo wam wathetha nam, ndaza ke ndaziqokelela izikhulu, amaphakathi noluntu luphela, ndamisela ukuba bonke babhalwe ngokwemizi yabo. Ndalufumana uludwe lwemilibo yokuzalwa kwâbo babebuye kuqala. Ke lona lwalumi ngolu hlobo: 6Naba ke abantu beli phondo ababuyileyo ekuthinjweni ababethinjwe ngukumkani uNabhukadenezare waseBhabheli. Babuyela eJerusalem nakwaJuda, yangulowo nalowo waphindela kwidolophu yakowabo, 7ndawonye noZerubhabheli, uYeshuwa, uNehemiya, uAzariya, uRamiya, uNamani, uModekayi, uBhileshan, uMisperete, uBhigwayi, uNehum noBhana.
Nalu ke uludwe lwamanani amadoda akwaSirayeli awabuyayo ekuthinjweni:
39Nalu uludwe lwababingeleli ababuyileyo ekuthinjweni:
inzala kaYedaya wendlu kaYeshuwa 973
43Nalu uludwe lwabaLevi ababuyileyo ekuthinjweni:
inzala kaYeshuwa noKademiyeli bendlu kaHodeva 74
46Inzala yezicaka zendlu kaThixo ezibuyileyo ekuthinjweni:
inzala kaZiya noHasufa noTabhayoti,
47inzala kaKerosi noSiya noPadon,
48inzala kaLebhana noHagabha noShalmayi,
49inzala kaHanan noGidele noGahare,
50inzala kaRaya noRezin noNekoda,
51inzala kaGazam noUza noPaseya,
52inzala kaBhesayi noMewunim noNefusim,
53inzala kaBhakebhuki noHakufa noHarure,
54inzala kaBhezeliti noMehida noHasha,
55inzala kaBhakose noSisera noTema,
56inzala kaNeziya noHatifa
57Kwinzala yezicaka zikaSolomon ezibuyileyo ekuthinjweni:
inzala kaSotayi noSoferete noPerida,
58inzala kaJala noDakon noGidele,
59inzala kaShefatiya noHatili noPokerete-zebhayim noAmon
61Nanga amadoda abuyileyo ekuthinjweni evela eTele-mela, eTele-hasha, eKerubhi, eAdoni, naseImere, angabanga nako ukuzilanda izindlu zooyise nomlibo wokuzalwa kwawo, khon' ukuze kuqondakale ukuba azelwe ngamaSirayeli na:
63Kubabingeleli: inzala kaHabhaya noHakozi noBhazilayi (ondlu yakhe ibisekwe yindoda eyathatha intombi kaBhazilayi umGiliyadi, yaza yabizwa ngegama likaBhazilayi)
64Aba bafunisisa ezincwadini zemilibo yokuzalwa, koko awulandekanga umlibo wokuzalwa kwabo. Ngenxa yoko abathatyathwanga njengabahlambulukileyo, baza abavunyelwa ukwenza umsebenzi wobubingeleli. 65Ke ngoko umlawuli wamaJuda wathi kubo mabangatyi kwinyama eyodwa eyinxaxheba yababingeleli eminikelweni de kuvele umbingeleli owayenokuqonda intando kaThixo ngalo mba ngokusebenzisa *iiurim neethumim.Mfud 28:30; Hlaz 33:866Ekubuyeni ekuthinjweni amanani ayemi ngolu hlobo:
amaSirayeli ewonke 42 360
67 7 337
iimvumi neemvumikazi 245
iidonki 6 720
70Inxenye yeentloko zezindlu yanikela ixhasa umsebenzi wokuhlaziywa kwendlu kaThixo. Le minikelo yayimi ngolu hlobo:
iikhilogram zegolide 8
izitya zokutshiza 50
izambatho zababingeleli 530
iikhilogram zegolide 168
iikhilogram zesiliva 1 250
iikhilogram zesiliva 140
izambatho zababingeleli 67
73Ke amaSirayeli ewonke – ababingeleli, abaLevi, abagcini-masango, iimvumi, abanye abantu, nezicaka zendlu kaThixo – bahlala ezidolophini zakowabo.1 Gan 9:2; Neh 11:3
UEzra ufunda umthetho
Ke kaloku yathi yakufika inyanga yesixhenxe, amaSirayeli selezinzile ezidolophini zawo,